wild wild west casino atlantika tanàna nj
fampiharana isaky online poker amici
19 aogositra 2010 (London, ANGLETERA) – ho fampiantranoana maimaim-poana Mipetraka & Mandeha poker marquee tamin'ny septambra faha-2 sy faha-3 ao ny zava-nitranga in Leicester Square, London. Ny "Mena Mafana Pokerplex" no milalao miaramila ny andian-ora iray, ny 50-mpilalao Mipetraka & Mandeha ao mandritra ny roa andro ny hetsika ny fivoaky ny boriki-samurai slot mandresy. Ankoatra izany, dia hisy ny Red Hot Poker Ferrari tamin'ny fampisehoana tao amin'ny Pokerplex mandritra ny hetsika. Ny mpilalao dia ho afaka miditra maimaim-poana antsapaka na hifaninana ao amin'ny Haingana am-Pofoany ny fifaninanana mba handresy ny fanalahidin'ny supercar ho amin'ny andro wild wild west casino atlantika tanàna nj.
Ny poker fifaninanana sy Ferrari super fiara fotsiny ny sasany amin'ireo nahasarika amin'ny tolotra nandritra ny roa andro, amin'ny DJs sy ny Red Hot Poker lavaka lane ankizivavy eo amin'ny tanana mba hitandrina ny olon-drehetra tanteraka ny voly, ny Red Hot Pokerplex dia azo antoka fa hivadika ny hafanana amin'ny volana septambra izao. Haino aman-jery fanontaniana: Jodie Thind Lyceum haino aman-Jery [email protected] +44 (0) 208 123 7184 Momba ny Red Hot Poker Mafana Mena Poker dia ny Entraction tambajotra, ny iray amin'ireo no tena nametraka ny tambajotra ao Eoropa amin'ny tsara mpilalao boky amin'ny ambaratonga rehetra (hatramin'ny 15.000 ireo mpilalao ao amin'ny fara tampony ny ora maro). Ny rindrankajy dia matanjaka sy marin-toerana, ary Mena-Mafana Poker dia lasa tena madio, sleek sy mora ny mampiasa interface tsara mba ho azo antoka kokoa ny mpampiasa traikefa ho an'ny beginners sy ny mahatsara mitovy. Momba Poker ao amin'ny Valan-javaboary 2010 dia manamarika ny faha-efatra taona Poker ao amin'ny Valan-javaboary wild wild west casino atlantika tanàna nj ora.
Natao 2-3 septambra in Leicester Kianja, ny zava-nitranga mitaona 20,000 poker mpankafy handray anjara amin'ny fahafinaretana, free poker fifaninanana sy ny hanatsara ny fahaiza-manao poker maimaim-poana amin'ny alalan'ny poker lahateny nampianatra ny lehibe indrindra mahatsara ao Eoropa. Twitter: https://twitter.com/pokerinthepark fampiharana isaky online poker amici. Get ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre.